ဂိမ်းပြဿနာများ | November 2019
မတ်လ 2019 ခုနှစ် tank တင့်ကားများကမ္ဘာ့ဖလားအပေါ်လျှော့စျေး
ဂိမ်းကစားသူမဲဆုံး လာ. , Wargaming ရလဒ်များတက်ချုပ်ဖော်ပြကုမ္ပဏီ၏ developer များ, တင့်ကားမတ်လ 2019 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုခံရလတံ့သောအကိုင်းအခက်ကိုချွတ်ဆုံးဖြတ်ရန်။ အဆိုပါ technique ကိုအတွက်ရှယ်ယာ Tank ၏ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်အကောင်းတစ်ဦးအစဉ်အလာဖြစ်လာကြပါပြီ။ ပြီးခဲ့သည့်လကဂိမ်းကစားတစ်ဦးလျှော့ AMX T110E4 အကိုင်းအခက်စျေးနှုန်းနှင့် 13.105 နှင့်အတူအကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်သို့ငါ DirectX ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်သလဲ? အမှား: program ကို run လို့မရဘူး, အဘယ်သူမျှမဖိုင်ကိုလည်းမရှိ d3dx9_33.dll
မင်္ဂလာပါ ယနေ့ပို့စ်အဓိကအားဖြင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းချစ်သူများသာသက်ရောက်သည်။ မကြာခဏ, အထူးသဖြင့်ကွန်ပျူတာအသစ် (သို့မဟုတ်မကြာသေးမီ reinstall ကို Windows) ရက်နေ့တွင်, သင်ကစားပွဲကိုစတငျသညျ့အခါများကဲ့သို့အမှားအယွင်းများရှိပါတယ် "ဟုအဆိုပါကွန်ပျူတာ d3dx9_33.dll ဖိုင်ကိုမကြောင့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း, မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြိုးစားပါ ... " (ကြည့်ပါ။
Resident Evil2ဇာတ်ကား: ဂိမ်းပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ
စတူဒီယို Capcom အစဉ်အလာမှရတဲ့၏ဂန္ဂိမ်း၏ပြန်လည်ရှင်သန်မှု။ အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူး - ပထမ Resident Evil သုညနှင့်ပြီးသားအမြစ်တစ်ခုပြန်လာကြောင်းသက်သေပြ၏အောင်မြင်သော remaster အခုမှ။ ဂျပန် developer များမူရင်းနှင့်စီးရီးအသစ်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်၏ပရိသတ်များမှသူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့, တဦးတည်းသောကျောက်ငှက်နှစ်ကောင်နှင့်အတူဦးသေဆုံးနေကြသည်။
ဂိမ်းကစားဘို့တစ်ဦးကပရဒိသု: အထိပ်, ပြပွဲတိုကျိုဂိမ်း Show ကို 2018 စူပါဂိမ်းမှာတင်ဆက်
ဂျပန်ရဲ့အရင်းအနှီးအတွက်၎င်း၏တိုကျိုဂိမ်း Show ကိုပြီးစီး - ဂျပန်, ကိုရီးယားနှင့်တရုတ်၏ကွန်ပျူတာ geeks အားဖြင့်ဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်း၏အောင်မြင်မှုများ၏အကြီးဆုံးပြပွဲ။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်တစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားစေလေးရက်အတွက် - 20 ကနေ 23 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှ - ပြပွဲဧရိယာ 300 ခန့်တထောင်ကလူအားဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဧည့်သည်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ထို့အပြင်ပြပွဲ၎င်းတို့၏ယခင်မှတ်တမ်းများနှင့်အသစ်ထုတ်ကုန်များ၏အရေအတွက်ကိုရိုက်နှက်နိုင်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်မျှော်လင့်ချက်များ: PS Plus အားမှာယူသူများအတွက်အခမဲ့ဂိမ်း
လပြီးသားနိုဝင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်ဂိမ်းများကိုဖြန့်ဝေနေပြီဖြစ်ပါတယ်: လစဉ်အခမဲ့ဂိမ်းဆာ Plus အားစောင့်ကြည့်သောသူတို့အားအာရုံစူးစိုက်မှု။ အတော်ကြာ hits စုစည်းပြီးနောက်။ အထူးသဖြင့်အာရုံကိုသေနတ်သမား Bulletstorm နှင့်သည်းထိတ်ရင်ဖို Yakuza Kiwami မှပေးဆောင်ရပါမည်။ subscriber များအား PS Plus အားများအတွက်ပင်လယ်ပြင်အဝိုင်းအခမဲ့ဂိမ်းမှာအပြည့်အဝ Clip Edition ကို Burly လူတို့, နိုဝင်ဘာလထဲမှာလာရာ: PS3Jackbox ပါတီ Pack ကိုအဘို့အနိုဝင်ဘာလ 2018 အားကစားပြိုင်ပွဲ PS4Yakuza Kiwami Bulletstorm2Arkedo စီးရီးဂိမ်းထဲမှာသွားရထားတဲ့စာရင်းပေးသွင်းထားသူသည် PS Plus အားအခမဲ့ဂိမ်းများ၏ content PS Plus အားစာရင်းသွင်းသူနိုဝင်ဘာ 2018 စုဆောင်းခြင်းတကယ်ကစားသမားကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါ NVIDIA အပေါ်ဂိမ်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည် (FPS) ကိုတိုးတက်စေရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဤဆောင်းပါးသည်သေချာသလောက်နီးပါးအားလုံးကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည် (အစဉ်အဆက်ဂိမ်းကို run ပါလိမ့်မယ်တဲ့သူကအနည်းဆုံးသူတို့အား) အမျိုးမျိုးသောဂိမ်းအတွက်ဘရိတ်နှင့်အတူကြုံတွေ့ခဲ့ကြ ... အဓိကအား NVIDIA ဂရပ်ဖစ်ကတ်များ (ဤနေရာတွင် ATI ပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ် AMD ၏) ၏ပိုင်ရှင်များမှအကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘရိတ်အုပ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်: မလုံလောက် RAM ကို, စတာတွေဟာခိုင်မာတဲ့ကို PC ဒေါင်းလုပ်အခြား application low-performance ကိုဂရပ်ဖစ်ကဒ် ... ဒါက NVIDIA ဂရပ်ဖစ်ကတ်များဂိမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုဖွင့်နှင့်ဤဆောင်းပါး၌အကြောင်းပြောဆိုချင်ပါတယ်။
2018 အတွက် PC မှာထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံးသမဝါယမဂိမ်း
အချို့လူများကသငျသညျမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းများ၏ကုမ္ပဏီ၌သူတို့ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပါလျှင်မည်သည့်စီးပွားရေး, ပိုပြီးပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်လာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ နှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းနှင့်အတူ: Single-player ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဖြတ်သန်းဆိုးဆိုးရွားရွားပျင်းစရာနှင့် monotonous ထင်ရနိုင်ပေမယ့် Co-op ဂိမ်းအတွက်နည်းလမ်းသစ်မှာဖျောပွထားပါနဲ့ဂိမ်းကစားတစ်ဦးမမေ့နိုင်သောစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပျော်စရာပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်နှင့် local area network ပေါ်မှာဂိမ်းအစီအစဉ်များ
အားလုံးစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်။ အများစုမှာကွန်ပျူတာဂိမ်း (10 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထွက်လာသောတောင်သူများ) ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Local network ပေါ်ရှိဖြစ်စေ, multiplayer ဂိမ်းထောက်ခံပါတယ်။ ဤသင်တန်း၏, ကောင်းသောလျှင်မဟုတ်တဦးတည်း "ဒါပေမယ့်" - များစွာသောအမှုများအတွက် Third-party ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီကတခြားချိတ်ဆက်ရန် - အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
Sid ခုနှစ်တွင် Meier ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု VI ကိုအခြားလူမျိုးသစ်ဖွစျလိမျ့မညျ
အနာဂတ်မှာထို့အပြင်စုရုံးမုန်တိုင်းနာမည်ကျော်မဟာဗျူဟာဂိမ်းယဉ်ကျေးမှုမာလီမှထပ်ပြောသည်။ မကြာသေးမီက Firaxis Games က၏ developer များအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့ ်. လူမြိုးတစျမြိုးကြေညာခဲ့သည်။ မာလီ၏ပြည်နယ်၏ခေါင်းပေါ်မှာဒီအာဖရိကတိုင်းပြည် Mansa Musa ၏သမိုင်းအတွက်သြဇာအရှိဆုံးခေါင်းဆောင်တဦးတည်းထလေ၏။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပိုဆုကြေးငွေရွှေနှင့်လူဆိတ်ညံလျက်ရှုခင်းမှချည်ထားလေ၏။
နေ့သည်ကောင်းသော။ တခါတရံသူကဒါဒီသို့မဟုတ်ဂိမ်းနှေးကွေးမှစတင်သည်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါဟာဘာကြောင့်, ပုံပေါ်မလဲ 'passes များကဲ့သို့စနစ်လိုအပ်ချက်များအရ, operating system ကိုမဆက်ကြောင်းနှင့် bug တွေလေ့လာတွေ့ရှိသည်မဟုတ်, ထိုအလုပ် - ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ... ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ငါမဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သူကြိုးစားခဲ့သော program တစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အားလုံးစာဖတ်သူများမှနှုတ်ခွန်းဆက်! မကြာခဏဟုတ်ကဲ့, အဘယ်သူမျှမရှိ, တစ်ဦးလက်ပ်တော့အပေါ်ခေတ်သစ်ဂိမ်းကစား, ဤသို့မဟုတ်ဂိမ်းနှေးကွေးမှစတင်သည်ဟူသောအချက်ကိုရင်ဆိုင်ရသူများသည်။ ဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုမကြာခဏအလုံအလောက်, ငါ့ဖို့အများကြီးမိတ်ဆွေများကိုလှည့်အတူ။ နှင့်မကြာခဏအကြောင်းရင်းဤဆောင်းပါး၌ငါ Laptop ကိုအပေါ်ဂိမ်းများကိုဆီးတားအဖြစ်သူတို့ရဲ့အရှိန်အပေါ်အချို့သောအကြံပေးချက်များပေးအဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းများအကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် ... မြင့်မားတဲ့စနစ်ကလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး, နှင့် setting တွင်အနည်းငယ် banal ခြစ်ကွက်များ။
အခမဲ့ PS Plus အားစာရင်းသွင်းသူဂိမ်းနှင့်မတ်လ 2019 ခုနှစ်တွင် Xbox Live ရွှေတစ်ရွေးချယ်ရေး
Sony နဲ့ Microsoft ကမတ်လ 2019 ခုနှစ်ရက်နေ့တွင်စာရင်းပေးသွင်းသူများဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ premiumnyh အခမဲ့ဂိမ်းပူဇျောပါပွီ။ အစဉ်အလာ dispensing အားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်အဆုံးသတ်သွားသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့် console ကို developer များအခမဲ့စီမံကိန်းများဖြန့်ဖြူးများ၏နိုင်ရန်အတွက်ချိန်ညှိလုပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသစ်ကတစ်လနှင့်အတူ Sony က PlayStation3အရေးယူမှုနှင့် PS Vita တို့အတွက်ဂိမ်းများကိုပေးဖို့ငြင်းဆန်။
မျှော်လင့်ချက်များဒီဇင်ဘာလ 2018: အခမဲ့ PS Plus အားစာရင်းသွင်းသူဂိမ်းများ, နှင့် Xbox Live ရွှေ
2018 ၏နောက်ဆုံးလ၌ပိုင်ရှင်တွေ subscriptions ကိုကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားစီမံကိန်းများကိုပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ပေးဆောင်။ တစ်ဦး PS Plus အားသေနတ်သမား, Arcade ပြိုင်ကား, ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုအမြင်အာရုံဝတ္ထုပါဝင်သည်မှဒီဇင်ဘာလ 2018 ခုနှစ်တွင်အခမဲ့ဂိမ်း။ subscription ကို Xbox Live ရွှေစုဆောင်းမှု၏ပိုင်ရှင်များပဟေဠိ, အရေးယူ, စိတ်ကူးယဉ်နှင့်သေနတ်သမားထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။
အားနည်း PC အတွက်ထိပ်တန်း 10 ဦးကိုအကောင်းဆုံးဂိမ်း
ခေတ်သစ်ဂိမ်းယခင်နှစ်ပေါင်း၏စီမံကိန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာခြေလှမ်းတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေး, ကောင်းစွာ-ဒီဇိုင်းကာတွန်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမော်ဒယ်နှင့်ကြီးမားသောအာကာသဂိမ်းက virtual world ထဲမှာနှစ်မြှုပ်ခြင်းတွေ့ကြုံခံစားရန်ကစားသမားများ ပို. ပင်လေထုနှင့်လက်တွေ့ကျကျခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအပျြောအပါးတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ကို PC အစွမ်းထက်ဟာ့ဒ်ဝဲပိုင်ရှင်လိုအပ်သည်။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကအားကစားဆိုက်ဘာစည်းကမ်း 2024 ခုနှစ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲပေါ်တွင်ပေါ်လာမည်မဟုတ်အဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားအတွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီထပ်တလဲလဲအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ e-အားကစားပြိုင်ပွဲများ၏စာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ 2024 ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည့်ပဲရစ်အတွက်နွေရာသီအိုလံပစ်မှာယင်း၏မျှော်မှန်းပုံပန်းသဏ္ဌာန်, အနီး။
AMD ၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ် (ATI Radeon) အရှိန်မြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? 10-20% အားဖြင့် FPS ဂိမ်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေူခင်း
နေ့သည်ကောင်းသော။ ယခင်ဆောင်းပါး၌ငါမှန်ကန်စွာ settings ကို Nvidia ကကတ်များကိုသတ်မှတ်ခြင်း, ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည် (ဒုတိယ FPS နှုန်းဘောင်၏နံပါတ်) ကိုတိုးတက်စေရန်မည်ကဲ့သို့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အခု AMD ၏ (ATI Radeon) ၏အလှည့်ရောက်လာတယ်။ ဒါဟာဆောင်းပါးအတွက်အကြံပြုချက်များအဓိကအားဖြင့် image quality ကိုလျှော့ချအသုံးပြုပုံမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းမရှိပဲ AMD ၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ကူညီကြမည်ကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။
ဘယ်တစ်ဦးဂိမ်းကွန်ပျူတာများအတွက်အိမ်ရာရှေးခယျြဖို့: ထိပ်ဆုံး 10
ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ configuration နဲ့အတူစတင်ခဲ့သည်: ကအရည်အသွေးမြင့်အအေးပေးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကိုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်တစ်ခုလုံးကိုကို PC များ၏တည်ငြိမ်မှုဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဂိမ်းကွန်ပျူတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌အာရုံစိုက်ရန်အဘို့အအိုးအိမ်ရွေးချယ်ဖို့အဘယ်အရာကိုသိရန်အရေးကြီးပေသည်။ ဂိမ်းကစားကွန်ပျူတာများအတွက်မာတိကာရွေးချယ်ရေးလိုအပ်ချက်အိုးအိမ် Cooler Master HAF X ကို DeepCool Kendomen Corsair ခဲနက်ရောင်စီးရီး 760T NZXT S340 Fractal ဒီဇိုင်းတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားဘို့အ S ကအနက်ရောင် Corsair carbide စီးရီး 200R Zalman Z1 Neo ကို GameMax ဟော့ဘီးအနက်ရောင် Thermaltake အဆင့် 20 XT COUGAR Panzer MAX က Black လိုအပ်ချက်အိမ်ရာရွေးချယ်မှု Define ဂိမ်းကို PC ထိပ်တန်းအောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များများအတွက်အိမ်ရာကိုရွေးချယ်ခြင်း: အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံကိုအချက် (; Full-မျှော်စင်, စူပါ-မျှော်စင် ATX, XL-ATX); ပစ္စည်း (သံမဏိ, လူမီနီယမ်), အအေးစနစ် (အနည်းဆုံးနှစ်ခုကြီးမားသော coolers); bracket က (cogs ထက်လျော့နည်း, ပိုကောင်း) ။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 ခုနှစ်တွင်အခမဲ့ PS Plus အားစာရင်းသွင်းသူဂိမ်းများ, နှင့် Xbox Live ရွှေတစ်ရွေးချယ်ရေး
န်ဆောင်မှုများ Xbox Live ရွှေနှင့် Play Station Plus အား၎င်းတို့၏အစဉ်အလာကိုပြောင်းနှင့်ဂိမ်းများကွာပေးခြင်းတစ်ဦးချင်းစီအသစ်ကတစ်လကိုဆက်လက်မပေးပါဘူး။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 ခုနှစ်တွင်ဂိမ်းကစား Microsoft ကကနေမူကြမ်းပလက်ဖောင်း4ရလိမ့်မည်, နှင့် Sony ကနေ6အအေးဆုံးခေါင်းစဉ်။ ဂျပန်စတူဒီယိုယခုလသည် PS Plus အား consoles စ PS3 နဲ့ Vita ဂိမ်းပါဝင်သည်လိမ့်မည်သည့်အခါ, နောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။
ရေနွေးငွေ့အပေါ်သုံးခုအများဆုံးတပ်မက်လိုချင်သောအဂိမ်းများကိုအာရှနှင့် CIS အတွက်တီထွင်လျက်ရှိသည်
ထိပ်သုံးခုအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းပလက်ဖောင်းရေနွေးငွေ့အတွက် 2018 ၏အဆုံးအားဖြင့်ဂျပန်နှင့်ယူကရိန်း developer များ၏စီမံကိန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်သတင်းထောက်ကိုရှိမုနျ Carless က "တွစ်တာ" ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုသူများသည်ဆိုင်ပေါ်ထိပ်သုံးခုအများဆုံးမျှော်လင့်ဂိမ်းကပြောသည်။ တံဆိပ်ခေါင်းရဲ့ထိပ်မှာအမှောင်စိုးလျ Sekiro ၏ developer များအနေဖြင့်ဂျပန်အရေးယူ-RPG တက်: Shadows နှစ်ကြိမ် Die ။
အဆိုပါ Duck Hunt ကဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုန်လှုပ်ဖွယ်အမှန်တရားထုတ်ဖော်ပြသ
, ဤကိစ္စတွင်အတွက် Hunt က Duck - အမည်မသိဂိမ်း - ပြည်သူ့တစ်ခါတစ်ရံ "ဟုအဆိုပါအမည်မသိဂြိုလ်ကိုမြေကြီးက" ဟုဆိုသည်။ အဘယ်သူသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဂိမ်းအကြားယခင်ဒုတိယအရောင်းရဆုံးကတည်းကလူအတော်များများသိ 8-bit နဲ့ဂိမ်း 1984 လွှတ်ပေးရန်, ထင်ကြလိမ့်မယ်, သေးသံသယမရှိခဲ့ပါသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိ၏။
https://termotools.com my.termotools.com © ဂိမ်းပြဿနာများ 2019